🥇 ▷ Waa maxay sababta daalacashada u joojineysa Flash taageerada iyo sida loo helo waxyaabaha… ✅
Waa maxay sababta daalacashada u joojineysa Flash taageerada iyo sida loo helo waxyaabaha…
Tani maahan war sheegaya in Adobe Flash soo baxayo. Biraawsarka ugu weyn ayaa sanadihii la soo dhaafay si tartiib tartiib ah u joojinayay taageerada, Adobe laftiisuna wuxuu ku dhawaaqay inuu joojinayo horumarka iyo taageerada marka la gaaro Diseembar 2020.
Tani waxay ka dhigan tahay in sanadka soo socda, ma jiri doonaan biraawsar caadiga ah oo gali kara waxyaabaha Flash-ka ah ee ku jira Websaydhka. Ma jiraan fiidiyooyaal, ciyaarno, ma jiraan goobo Flash duug ah, waxba ma jiraan. Marka waa maxay sababta waxaani u dhacayaan, waa maxay jadwalka iyo maxaad sameyneysaa haddii aad runtii u baahan tahay inaad soo gasho nooc ka mid ah walxaha Flash ka gadaal?
Muxuu Flash ugu maqan yahay?
Qorrax dhaca si lama filaan ah waa tallaabo amni-wadid ah. Flashku mar waxay ahayd heerka loogu talagalay fiidiyowyada, ciyaaraha, iyo waxyaabaha kale ee websaydhka ah, laakiin aad bay ugu nugul yihiin ka faa’iideysiga, iyadoo ay ugu mahadsan tahay adeegsiga xusuusta iyo arrimo kale. Dhibaatada kale waa dhibaatada ku-biiritaanka tikniyoolajiyadda gacanta sababtuna tahay inay tamarta nuugto iyo taageero la’aanta macruufka iyo Android-ka.
Ku keydinta barnaamijyada kombiyuutarka desktop badankoodana leh godad ka badan kuwa shaandhada miiqday iyo nooc badbaado leh, sidaad qiyaasi karto, waa waxoogaa madax xanuun ah. Ka dib markii heerar kale, sida HTML5 iyo WebGL, ay noqdeen kuwa sii shaqeynaya oo si ballaadhan ula jaan qaada kombiyuutarka desktop iyo moobiilka, maalmihii Flash ayaa la tiriyay.
Goormuu Flash joogsadaa shaqadiisa?
Waqtiga xaadirkaan, biraawsarradu intooda badan waxay kuu oggolaanayaan inaad u adeegsato waxyaabaha Flash-ka ah ee ku saleysan xaalad xaalad ahaan adigoo gacanta ku oggolaanaya, laakiin xitaa ikhtiyaarkaas ayaa baaba’aya sannadka dambe. Waqtiga saxda ah ayaa dhici doona iyada oo kuxiran biraawsarkaaga aad isticmaaleyso, maxaa yeelay qof walbaa wuxuu ku dhawaaqay waqtiyo kaladuwan si meesha looga saaro taageerada Flash, laakiin hadii wax walboo ay u socdaan sida qorshuhu yahay, dhamaan waxyaabaha ka haray Flash-ka ee internetka ayaa la heli doonaa dhamaadka 2020. .
Waa tan jadwalka guud:
Horraanta 2020: Firefox waxaay gebi ahaanba ka saari doontaa taageerada Flash nooca macaamiisha. Diseembar 2020: Adobe Dib uma cusbooneysiin doonto Flash ama looma soo bandhigi doono si loo soo dejiyo. Diseembar 2020: Chrome Iyo badhamada daalacashada kujira Chromium (oo ay kujirto Microsoft Edge) waxay baabiin doontaa dhamaan taageerada Flash.
Wali ma heli karaa Flash waxyaabaha ku jira?
Wixii ka dambeeya 2020, wixii ka haray Flash wali waxaa laga heli karaa websaydhka, laakiin wali waxay qaadataa dadaal yar. Biraawsarrada cusub ma awoodi doonaan inay Flash sitaan, laakiin taageerayaasha Flash ee runtii aad u baahi qaba ayaa adeegsan kara nooca biraawsarka, kana horjoogsada cusboonaysiinta otomaatiga ah, oo waxay u isticmaali karaan oo keliya wax Flash ah.
Dabcan, waxay la timid arrimo u gaar ah oo dhinaca amniga ah, sidaa daraadeed u samee naftaada halistaada oo qaado taxaddarro sida ku dhejinta sanduuqa sanduuqa iyo booqashada kaliya goobaha lagu kalsoon yahay. Ama, waxaa laga yaabaa inay jiraan wali baarayaal (Firefox / Chromium fargeeto) oo doorta inay Flash ku sii shaqeeyaan si uun, marka helitaanka midkood ayaa sidoo kale caawin kara.
Dabcan, iyadoo Flash si wax ku ool ah looga baxo Websaydhka, boggaga bixiya Flash-ku saleysan waxa laga yaabaa inaanay diyaar noqon muddo dheer, sidaa darteed haddii ay jiraan wax aad rabto inaad kaydiso, waa inaad soo degsataa faylalka Flash (SWF) oo aad isticmaasho Flash player desktop ( sida SWF file Player) si loo furo. Qaabkani wuxuu noqon karaa waqti qaadasho iyo farsamo haddii aad isku daydo inaad keydiso dhammaan waxyaabaha aad kahesho.
Xulashada ugu dambeysa uguna wanaagsan ee aad ka heli karto si aad uhesho waxyaabahaan waa Flashpoint, oo ah mashruuc socda oo lagu keydiyo laguna qaybinayo Flash webka. Kumaan kun oo ciyaarood iyo riwaayado ayaa hada la xayeysiiyay oo diyaar kuu ah inaad kala soo baxdo oo aad ciyaarto si kasta oo aad jeceshahay, marka waa fursad fiican oo aadan u baahnayn inaad gacantaada ku soo celiso ciyaarihii aad ka baqday inay baaba’aan. Haddii ay jiraan wax liita oo ka kooban waxyaabahaaga Waxaad had iyo jeer wax ku biirin kartaa bulshada oo aad ku dari kartaa naftaada.
Toosh gudaha La Pan
Waxaa lagu qiyaasaa in qayb yar oo ka mid ah Websaydhadu ay isticmaalaan Flash (Google waxay ku qiyaaseysaa qiyaastii 17% dadka isticmaala inay arkaan waxa ku jira Flash maalin kasta), marka waxaa laga yaabaa inaadan u muuqan faraq weyn oo raadintaada maalinlaha ah. Waxyaabo badan oo Flash ku saleysan ayaa la cusbooneysiiyay si ay u isticmaalaan heerar casri ah sida HTML5, WebGL, ama Midnimo, iyo degel kasta oo raba inuu sii wado bixinta nuxurka wixii ka dambeeya 2020 waa inay hubiyaan inay sidoo kale sameeyaan. Haddii ay jiraan wax Flash ah oo aad si gaar ah ugu lifaaqdo, hadda waa waqtigii la hubin lahaa inuu sii jiro.
Maqaalkani miyuu faa’iido lahaa? haddii kale